अमेरिका हिँडेका चार सय नेपालीको बिचल्ली : के भन्छ परराष्ट्र ? - Khasokhas Magazine
अमेरिका हिँडेका चार सय नेपालीको बिचल्ली : के भन्छ परराष्ट्र ?
अमेरिका पुर्‍याउने आश्वासनसहित ती नेपालीसँगै हिँडेका तस्करहरु पैसा लिएर बाटैबाट भागेपछि बिजोग भएको हो । निकरागुवा, कोलम्बिया, बुल्गेरिया, कोस्टारिका, पेरु र मेक्सिकोसहितका ल्याटिन अमेरिकी देशसम्म पुगेका नेपाली ठाउँ ठाउँमा अलपत्र परेका खबर आजको अन्नपूर्णपोस्टमा छापिएको छ ।
करिब ४ सय अलपत्र
अमेरिका पुग्ने आशमा हिँडेका दीपेन्द्र घर्तीले आफू बोलिभिया हुँदै ब्राजिलबाट कोष्टारिका पुगेर अलपत्र परेको बताए । उनले कोष्टारिकासम्म पुग्न एजेण्टहरु राजेन्द्र अधिकारी र नारायण रेग्मीलाई तीन हजार अमेरिकी डलर तिरिसकेको बताए । ‘भएका पैसा सकिएपछि धेरै नेपालीको विचल्ली भएकोछ’, उनले भने, ‘म ३ हजार अमेरिकी डलर डलर तिरेर कोष्टारिका आइपुगेको छु । यहाँबाट न अघि बढ्ने अवस्था छ न त पछाडि फर्कन नै सक्छु ।’
बाटैमा जान्छ ज्यान
मानव तस्कारको पछि लागेर उक्त रुटबाट अमेरिका पुग्ने सपना बोकेर हिँडेका कयौँ नेपाली बीच बाटैमा ज्यान समेत गुमाउने गरेका छन् । नेपालीहरु भारतको दिल्ली, रुसको मस्को, स्पेन र बोलिभियासहितका देश हुँदै कष्टपुर्ण यात्रा झेलेर जल र स्थल मार्गबाट अमेरिका तर्फ हान्निने गरेका छन् ।
मानव तस्करले मोटो रकम लिएर जहाज, डुंगा, रेल र ट्रकमार्फत जोखिमपूर्ण तरिकाले विभिन्न देशका मान्छे अमेरिका पुर्‍याउँदै आएका छन । पछिल्लो समय तस्करले नेपालीलाई समेत यस्तो जोखिम मोलेर अमेरिका पुर्‍याउने भनेर लाने गरेका छन् ।
अमेरिका जाने सपनासहित नेपालीले ४० देखि अधिकतम ७५ लाखसम्म रकम खर्च गरेर खर्च गर्छन् । पछिल्लो समय डोनाल्ड ट्रप राष्ट्रपति भएपछि मेक्सिकोको सीमामा कडाई गरिएको छ ।
त्यसैगरी आप्रवासीप्रति कडा नीति लिएपछि गैरकानुनी रुपमा प्रवेशी गर्ने नेपालीलाई अमेरिका असहज भएको छ । अमेरिका प्रवेश गर्ने मेक्सिकोको नाकामा कडाइ भएका कारण सयौँ नेपालीको विभिन्न ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा बिचल्ली भएको हो ।
दलाल बोल्नै चहाँदैनन्
नेपालीहरुलाई अमेरिका लाने काममा सक्रिय काठमाडौँका प्रकाश श्रेष्ठले यसबारेमा बोल्नै चाहेनन् । उनले आफुलाई नेपाली अपलपत्र परेकोबारेमा थाहा नभए भन्दै बोल्नै तयार भएनन् । ‘मलाई थाहा छैन’उनले यति मात्रै उत्तर दिए । तर, पीडित नेपालीहरुले उनीसहितका ५ जना भन्दा धेरैले लाखौँ पैसा लिएको भन्दै सम्पर्क नम्बर पनि दिएका छन् ।
परराष्ट्र के भन्छ ?
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरताराज पौडेलले मानव तस्करले उक्त रुटबाट अबैध रुपमा नेपालीलाई अमेरिका लाने गरेको धेरै घटना भेटिएका बताए । उनले मानव तस्करले अलपत्र पारेका धेरै नेपालीलाई पटक पटक परराष्ट्र मन्त्रालय र वासिङटन डिसीस्थित नेपाली राजदुतावासको पहलमा उद्धार गरिरहेको जानकारी दिए ।
पौडेलले जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै पटक जमिनको बाटोबा अमेरिका नजान समेत नेपालीलाई सचेत गराइरहेको बताए । ‘हामीले धेरैको उद्धार गरेका छौँ, त्यो बाटो अमेरिका पुर्‍याउने भन्दै धेरै नेपालीलाई मानव तस्करले विचल्ली बनाएका छन्’, उनले भने, ‘त्यो बाटो जोखिमपूर्ण छ भनेर पटक पटक सचेत समेत गराइरहेका छौँ ।’उनले पछिल्लो घटनाबारे आफूहरुसँग सूचना नआएको बताए ।
आइतवार, चैत्र ११, २०७४ मा प्रकाशित